Blog Tipping နောက်ဆက်တွဲ - Shonnie Lavender မှကျွန်ုပ်၏ Blog Coach | Martech Zone
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မကြာသေးမီကငါထောက်ပံ့ခဲ့သည် Shonnie Lavender မှဘလော့ဂ်များအတွက်အကြံပြုချက်များ သူမ၏စိတ်ကူးဘလော့ဖြစ်သော My Blog Coach အတွက်။ Shonnie သည်အကြံဥာဏ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့သူမရဲ့ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာရဲ့ခေါင်းစဉ်ပါ။
ဤတွင် 'Before' header ကိုဂရပ်ဖစ်:
ဤတွင် 'After' header ကိုဂရပ်ဖစ်:
ဂရပ်ဖစ်အသစ်သည်မည်မျှဖိတ်ခေါ်နေသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဝိုး! ဘာပြောင်းလဲမှုလဲ။ ဓာတ်ပုံသည်ဖော်ရွေပြီးဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ Shonnie ရဲ့အကြောင်းအရာကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပြီးဒီပုံစံအသစ်ကပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဘလော့ဂါအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဓါတ်ပုံတွေတင်တာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ် သတိရပါ၊ ရုပ်ပုံသည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်သင်နှင့်ဆက်သွယ်နေသောရှေးရှေးများအတွက်ဖြစ်သည်။
Shonnie အလုပ်ကောင်း! သင်၏တိုးတက်မှုသည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကဲဖြတ်ပါ။
မင်းဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရှာကြည့်ပါ Blog တင်ရန် post.
21:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 15
ဒါကအတော်လေးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ typeface ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်ပြီးရိုးရိုးလေးပြောင်းလိုက်မယ်။